‘नेम्पा फिल्म अवार्ड’ पोस्टपोन्ड किन गरियो .... – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘नेम्पा फिल्म अवार्ड’ पोस्टपोन्ड किन गरियो ….
‘नेम्पा फिल्म अवार्ड’ पोस्टपोन्ड किन गरियो ….
September 12, 2017 Keshab Khadka Entertainment, Event 0
नेपाल चलचित्र संघ र डीएबीएस इन्टरटेन्मेन्ट, अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा असोज १ गते (सेप्टेम्बर १७ तारिखमा) हुने भनिएको ‘नेम्पा फिल्म अवार्ड’ पोस्ट्पोन्ड गरिएको छ ।
टेक्सासबासी नेपालीहरुको विशेष आग्रहमा अवार्डको आयोजना मिति पोष्टपोन्ड गरिएको आयोजकले बताएको छ । टेक्सासको विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक विपत्ति परेकोले र साथै नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमीको पूर्वसन्ध्या समेत परेको हुँदा टेक्सास बासी नेपालीहरुको विशेष आग्रहमा अमेरिकाको आयोजक सस्ंथा डि ए बि एस इन्टरटेन्टमेन्टले पूर्व निर्धारित समय सार्न आग्रह गरेका हुन ।
अब यो अवार्ड कात्तिक १९ गते अर्थात नोभेम्बर ५ मा आयोजना हुने भएको छ । आइतबारका दिन पूर्व निर्धारित स्थानमा नै भव्य, सभ्य र व्यवस्थित रुपमा नेम्पा अवार्ड २०१७ सम्पन्न गर्ने आयोजकले बाताएका छन ।
‘आयो दशै आयो’
‘दि कर्मा’ को औपाचारिक निर्माणको घोषणा..